Terms & Conditions | Trading Myanmar Ad Portal
The company is not responsible for the claims of any buying, selling and any transaction process relating the advertisement. Any issues with buying, selling, or service providing should be resolved against the opposing party. We will not count these affairs asatreatment.
Duplicate Ads are not allowed to submit during the live Ad, please resubmit again after the current Ad expired.
Unnecessary capitalization of the characters in the post title
Spammy email template & Lazy submissions
The Ad submitter, known as the advertiser needs to wait the maximum of 24hours for the listed Ad to go live.
The articles, images and videos from this free classified ad portal are referred or re-directed from various open sources. Trading Myanmar Ad Portal is not entitled any responsibility for any third party copyright issues for copying, distributing or displaying on Trading Myanmar Ad Portal Website.
The Ad posts, listings, pictures, telephone number, the address, tangible or intangible information or assessments from the submitter to Admin and known us the Ad, the request to be listed at the Trading Myanmar (Classified Ad Portal) are referred to the submitter, who is solely responsible for each and every submission or distribution of the Ad information.
Financial related services (i.e, money ****), Adult explicit Ads, religious discrimination Ads and any other irrelevant Ad listings are strictly discouraged to be submitted. TradingMyanmar Team has rights to approve, revoke, delete the Ad/Ads/Comments/link spamming and; or ban the specific user at any time for whatsoever reasons.
Trading Myanmar Ad Portal is not entitled any responsibility for any third party copyright issues for copying, distributing or displaying on Trading Myanmar Ad Portal Website. If you come acrossapost or comment that violates our Ad Policies you can report the abuse or request to remove the post to Admin.
To report, please fill up this form and submit.
၁) ကြော်ငြာတင်ရာတွင် မိမိကြော်ငြာ၏ အကြောင်းအရာကိုု ဖြစ်နိုုင်သမ ျှ အသေးစိတ်ဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုု့မှသာ မိမိ ကြော်ငြာကိုု စိတ်ဝင်စားသူ အနေဖြင့် ကြော်ငြာသူကိုု အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂) ကြော်ငြာတင်ပြီးတဲ့အခါ သင့်ကြော်ငြာမြင်ရဖို့အတွက် အများဆုံး ၂၄ နာရီစောင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃) အကြောင်းအရာတူ ကြော်ငြာများကို တစ်ခုသာလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄) အကြောင်းအရာ ပြည့်စုံမှုမရှိသော ကြော်ငြာများကို Trading Myanmar Ad Portal တွင်ဖော်ပြပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၅) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသောကြော်ငြာများကို Administrative Team ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အကြောင်းပြချက်မရှိ အချိန်မရွေး တည်းဖြတ်ခြင်း၊ အတည်ပြုပေးခြင်း၊ (သို့) ပယ်ချခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
Article Submission အတွက် လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ
၁) မြန်မာ ဇော်ဂျီဖောင့် (သို့) မြန်မာ၃ ဖောင့် ဖြစ်ရမည်။ File extension .doc, .docx, .pdf (သို့) email extract format ဖြစ်ရမည်။
၂) မှီငြမ်း ကိုးကားသော အထောက်အထား၊ စာအုပ်၊ website link (သို့) အယ်ဒီတာ အာဘော်အတွက် စာရေးသူ၏ Identity (ဝက်(ဘ်)ဆိုုက်ဒ်တွင် ဖော်ပြရန်မဟုတ်) ပူးတွဲပါရှိရမည်။ သတင်းနှင့် ပတ်သတ်သော ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို ပါရှိလ ျှင် အလွန်ကောင်းသည်။
၃) Article အကြောင်းအရာ တစ်ခုုအတွက် မြန်မာစာ စာလုံးရေ (Word Count) ၁၀၀ မှ ၃၀၀ ကြားရှိရမည်။
၄) မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော Article များ၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးအရ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ Article များ၊ Sexual Related Material နှင့် ညစ်ညမ်းခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲမှု Article များ မပါဝင်စေရ။
All times are GMT 6.5. The time now is 6:14 pm.